Shiinaha QDF-400 WP Nidaamka Soo-saarista Joogtada ah ee Jet Mill Wixii 400kg warshad iyo soo saarayaasha | Qiangdi
Khadka ugu caansan ee WP ee Pakistan-QDF-400 nidaamka wax soo saar isdaba-joog ah sida ka hooseysa jaantuska qulqulka iyo sawirka
Marka hore, Qalabka ceeriin wuxuu ka quudiyaa quudiyaha - wareejinta maaddada illaa 3 m3qas a for premixing, iyo boodh aruuriyaha ururin doonaa boodhka inta lagu guda jiro hawsha quudinta, ka dibna 3m3dukaan hopper wax isku qasan, ka dibna galaan mashiinka jet for axdi qarameedka, cabbirka walxaha wax soo saarka lagu hagaajin karaa by hagaajinta xawaaraha wareega kala duwan ee wheel fasalka ,. Mashiibada ka dib, waxyaabaha ayaa loo wareejin doonaa duufaanka iyada oo loo marayo xoogga salka ku haysa ee taageere qabyo ah iyo aruuriyaha boodhka ee dusha sare ee 4m3 fiicni, ka dibna u wareeji 4m labaad3 miiska jiifka jiifka ah ee isku darka ka hor inta aan la xirxirin ama loo wareejin nidaamka WDG.
Faahfaahin faahfaahin ku saabsan dhammaan khadka WP
Nidaamka hawada - kombaresarada hawada, saarista saliida, haanta keydka hawada, qalajiyaha qaboojiyaha hawada, shaandhada saxda ah.
Kombaresarada waxaa loo isticmaalaa in lagu cadaadiyo hawada, hal-marxalad, saliid la isku duro oo lagu kaxeeyo mootada, oo ay ku jiraan dhamaadka hawada, mootada, kala soocida saliida / gaaska, qaboojiyaha saliida, qaboojiyaha hawada, taageere (nooca hawo-qaboojinta kaliya), dabinka qoyaanka, golaha xakamaynta korantada, dhuumaha gaaska, dhuumaha saliida iyo dhuumaha biyaha (nooca biyo qaboojiyaha kaliya), nidaamka xakamaynta.Waxaa jira labo rotors iskuxidhan oo kujira gudaha sanduuqa. Ragga rotorku wuxuu leeyahay 4 ilig, rotor haweenku waxay leedahay 6 ilig. Rotor dheddigga waxaa ku xiga rotor lab oo xawaare sare ku socda. Iyada oo ay barakicista ilkuhu yartahay inta udhaxeysa 2 rotors, hawo ka soo gasho miiraha soo galaya iyo saliida saliidda leh ee ka sameysan dahaarka ayaa si tartiib tartiib ah loogu cadaadiyaa cadaadis sarreeya Marka barakaca ilkuhu toos u gaadho dekedda laga soo baxo, isku-darka hawo / saliid isku cufan ayaa ka soo qulqulaya dekedda, ka dibna u sii gudbaya kala-soocida saliidda / gaaska si loo kala saaro saliidda iyo hawada. Marka xigta, socodka hawada iyada oo loo marayo waalka cadaadiska ugu yar, qaboojiyaha hawada iyo dabinka qoyaanka, ugu dambeyntiina dhuumaha gaarsiinta hawada. Saliida la kala saaray ayaa ku sii dhacaysa qaybta hoose ee SEPARATOR, ka dibna u qulqulaya meeldhexaadka saliidda, shaandhada saliidda iyo ugu dambayntii in la soo afjaro hawada dib-u-warshadaynta natiijada cadaadiska kaladuwan.
Hawo kulul iyo qoyan oo qabow si ay u galaan kuleyliyaasha kuleylka horay loo sii qaboojiyey (uumi bixiye hawo qabow oo cufan isku bedel kuleylka) si loo yareeyo culeyska saaran uumi bixiyaha, iyadoo la kululeynayo hawo cufan oo laga soo saaray qabowga, kana fog dhereg. Kadibna wuxuu galayaa uumiga waxaa la sii qaboojiyey ilaa 12 ℃ hoose, dib u soo noqoshada kala-soocaha waxaa lagu soo rogi doonaa habka qaboojinta biyaha ayaa la go'doomiyey, buurta sub-Shui aaladda sii deynta. Banaanka hawada qabow ee kuleylka ah ee kuleylka kuleylka horay u sii deynaya.
Haanta Kaydinta Hawada
haanta keydinta hawada (markabka cadaadiska), oo sidoo kale loo yaqaan taangiga keydinta hawada ee la cadaadiyay, waa markab cadaadis si gaar ah loogu isticmaalo kaydinta hawo cadaadis leh. Waxaa inta badan loo isticmaalaa keydinta keydka gaaska, waxayna ka ciyaareysaa doorka xasilinta cadaadiska nidaamka, si looga fogaado raritaanka iyo soo dejinta bareeraha hawada iyo ka saarista biyaha dareeraha badankood. Haanta keydinta gaaska guud ahaan waxay ka kooban tahay jirka dhululubada, madaxa, flange, nozzles, walxaha qufulka iyo taageerooyinka iyo qeybaha kale iyo qaybaha. Intaa waxaa dheer, sidoo kale ku qalabaysan waalka badbaadada, qiyaasta cadaadiska, waalka bullaacadaha iyo qalabyada kale si loo dhameystiro doorka howlaha wax soo saarka kala duwan.
Qaybta ugu weyn-jet mashiinka iyo iskudhafka & nidaamka ururinta boodhka
Badeecadu waa pulverizer sariir dheecaan leh oo leh hawo cadaadis oo ah dhexdhexaad wax burburinaysa. Jirka milixdu wuxuu u qaybsan yahay 3 qaybood, oo kala ah aagga wax lagu burburiyo, aagga gudbinta iyo aagga qiimeynta. Aagga Darajaynta waxaa la siiyaa shaag shayga, xawaaraha waxaa lagu hagaajin karaa beddelaha. Qolka burbura wuxuu ka kooban yahay mashiinka wax lagu shiido, quudiyaha, iwm. Qalabka giraanta ee hawada la siinayo ee ka baxsan haanta burburin waxay kuxirantahay mashiinka burbura.
Jet mill- iyada oo ku hoosjirta ficilka xoogagga qeybaha giraanta qeybinta iyo awoodda bartamaha ee taageere qaboojiye, maaddadu waxay noqoneysaa sariir dheecaan leh oo ku jirta gudaha miraha diyaaradda. Halkaas oo laga helayo budo jilicsan oo kala duwan.
Nidaamka Xakamaynta PLC- Nidaamku wuxuu qaataa xakamaynta shaashadda taabashada caqliga, hawlgalka fudud iyo xakamaynta saxda ah. Nidaamkani wuxuu qaataa PLC heer sare ah + habka xakamaynta shaashadda taabashada, shaashadda taabashadu waa terminalka hawlgalka ee nidaamkan, sidaas darteed, aad ayey muhiim u tahay. In si sax ah loo qabto dhammaan furayaasha 'shaqada shaashadda taabashada si loo hubiyo hawlgalka saxda ah ee nidaamkan.
Quudiyaha Sare- Si dabacsan ugu xirnaanta aruuriyaha boodhka si looga fogaado in boodhku ka daato, oo loo heli karo quudinta naaska.
Kalasooca Duufaan iyo boodh aruuriyaha–Waa alaab soo uruurin iyo ururin boodh kala firdhinaya jihada socodka alaabta ceyriinka ah isla markaana ka fogaaneysa isku ururinta maaddada. Hubi in dib-u-warshadaynta boodhka ee geeddi-socodka wax-soo-saarka si loo buuxiyo shuruudaha ilaalinta deegaanka ee soo-saarka nadiifka ah iyo qiiqa wasakhaysan.
Mataanaha fiicni fur -waxuu leeyahay kiciyaal dheer iyo naqshad naqshadeysan ， taas oo ka ilaalinaysa gabi ahaanba waxyaabaha isku qasmaya inay hoos u degaan ficilkii kacaanka iyo wareegga.
Mashiinka isku-dhafka mataanaha ayaa isku daraya budada, granule iyo isku-darka dareeraha. Wareegga mashiinka isku-shaandheynta mataanaha waxaa lagu dhammaystiray qaybo matoorro ah iyo kuwa yareeya cycloid. Iyada oo la isku qasinayo asymmetric-ka oo ay yeelanayaan laba boolal, xaraashka walaaqaya ayaa la ballaadhin doonaa xawaaraha kicintana waa la dedejin doonaa. Mashiinka isku dhafan waxaa dallacsiinaya laba meerisyo asymmetric ah oo si dhakhso leh u wareegaya, oo sameysmaya laba tiir oo wareeg ah oo aan isle'eg ahayn oo kor uga socda darbiga silsiladda. Gacanta leexashada ee uu ku wareego wareegga wareegga, waxay ka dhigaysaa maaddada wareegga ah ee heerarka kala geddisan galka baqshadda, qaybta kala-baxa ee maaddada la dallacayo, qaybta kale ee maaddada lagu tuurayo, si markaa loo gaaro qalabka wareegga wareegga oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo.
Miisaanka muquuninta muquuninta ah -Way ku habboon tahay in la sameeyo alaabooyin gaar ah oo u baahan in lagu daro walxaha ama kiimikooyin kale oo ku jira badeecada la dhammeeyay. Isku darka ayaa aad uga fiican kana saxsan kan fiicni mataanaha isku qabta. dhererka jirka oo ka hooseeya fiicniyaha mataanaha isku dhafan, waa fududahay in la rakibo.
Mashiinka laba-geesoodka ah ee jiifka ah wuxuu ka kooban yahay taangiga jiifka ah ee U-qaabeeya, daboolka sare oo leh (ama aan lahayn) furitaanno, hal usheeda dhexe oo lagu qalabeeyey agitator isku-darka ribbonka, qaybta gudbinta, qaab dhismeedka taageerada, walxaha qufulka, dhismaha dheecaanka iyo wixii la mid ah. Qalabka Ribbon had iyo jeer waa laba lakab. Dusha sare ee lakabka ayaa ka dhigaya walxaha inay ka soo baxaan labada daraf ilaa xarunta iyo xarigga lakabka gudaha ayaa ka dhigaya walxaha inay ku faafaan bartamaha illaa laba daraf. Qalabku wuxuu sameeyaa wareegga inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa soo noqnoqda iyo isku dhafka isku midka ah ayaa la gaaraa.
Qeyb kale –Fanaan-faneed iyo Biyaha nadiifiye
Fan qabyo ah- Ka dhig dhammaan nidaamka WP cadaadis taban adoo adeegsanaya awoodda bartamaha, oo markaa ku kaxee sheyga si aad u jajabiso oo aad u siidayso gaaska qiiqa ee nidaamka wax shiidaya.
Sifeeyaha biyaha- ka hooseeya budada 0.5um ayaa soo galaya masaxda biyaha oo ay ku dhex milmayaan lakabka filimka biyaha, laguna daadiyaa weelka hoose ee socodka biyaha.si looga fogaado deegaanka wasakhda wasakhda.
Gaas gaaska ku jira ayaa lagu soo bandhigaa iyadoo la raacayo jihada la taaban karo ee ka timaadda qaybta hoose ee dhululuubta oo isku shaandheynaysa. Qaybaha siigada waxaa loo kala saaraa xoogga santuuqa waxaana lagu tuuraa derbiga hoose ee dhululubada. Waxaa lagu xayeysiiyaa lakabka filimka biyaha ee ku qulqulaya gidaarka gudaha ee silsiladda waxaana lagu sii daayaa marinka boodhka iyada oo ay weheliso koorta hoose ee socodka biyaha.Fimbiga biyaha waxaa sameeya dhowr nozzles oo lagu habeeyay qaybta kore ee dhululubada si loo buufiyo Biyo ahaan darbiga qalabka.Sidan oo kale, darbiga gudaha ee dhululubo ayaa had iyo jeer lagu daboolaa filim biyo aad u dhuuban oo gadaal u wareegaya si loo gaaro ujeedada ah hagaajinta saameynta boodhka.
Meel laga baxo
Hore: Jet Mill WP Nidaamka – U adeegso aagagga Kiimikada